‘Positive’ cricket key to sub-continent success – Gibson
Standard Bank Proteas coach Ottis Gibson
Umqeqeshi wama-Standard Bank Proteas, u-Ottis Gibson, ukholwa ukuthi ikhilikithi ‘enhle’ izoba ukhiye kwimpumelelo ye-Test series ezayo ezodlalwa ne-Sri Lanka ezoqala e-Galle ngo-July 12. Ama-Proteas aqedile ngamalungiselelo e-Colombo ngokulingana kumdlalo wezinsuku ezimbili bedlala ne-Sri Lanka Board XI ngeSonto, futhi bazoya e-Galle ngoMsombuluko ngaphambi komdlalo wangoLwesine.
u-Gibson wakuqala kahle ukuqeqesha kwakhe kwimidlalo emide, wanqoba eyisikhombisa emidlalweni eyisishagalolunye ephethe. i-Test series enemidlalo emibili kwi-sub-continent kuzoba umsebenzi wakhe wokuqala ngaphandle kwe-South Africa, inselelo ayilindele njengoba ebheke ukubuyisela iqembu lama-Test ku-No.1 kuma-ICC Test rankings.
“Uma sizonqoba kulesimo kuzomele sidlale kahle futhi sizame kwezinye izimo ukuthi sithathe okuhle,” kusho u-Gibson e-Colombo ngeSonto. “Indlela i-Sri Lanka edlala ngayo ikhilikithi yabo, uma kungena oshayayo bazoba nabavimbayo ngakwi-bat, okusho ukuthi kuzoba namathuba okukora.”
“Kumele ube nokuhle futhi uthembe ngokwanele kwizinhlelo zakho zomdlalo ukusebenzisa izikhala kwi-outfield. Uma uzophuma, ungamane uthathe okuhle uzame ukuthola ama-runs usakhona kwi-crease. Ngicabanga kanjalo mina, futhi isimo salapha asikushintshi lokho.”
Umqeqeshi ugculisekile ngomphumela womdlalo wokuqeqesha, abaphosayo nabashayayo bathole ukusebenza. u-Faf du Plessis uthole ama-runs amaningi u-79 ngesikhathi beshaya ngosuku lwesibili, futhi wasekelwa u-Hashim Amla (78), u-Dean Elgar (43) no-Temba Bavuma (58), ngaphambi kokuthi abashaya ngezansi baqathake iqembu lagcina likhishiwe linama-runs angu-338.
“Isikhathi esiningi ngicabanga ukuthi sithole esikade sikufuna,” esho. “Izolo ngicabange ukuthi siphose kahle, okwamanje kumayelana nokujwayela isimo sase-Sri Lanka. Besazi ukuthi i-wicket izohamba kancane, bekuhambelana nokuthi abaphosayo bathole ithuba, ikakhulukazi ama-seamers.”
“Ngicabange ukuthi u-Shamsi udlale kahle kakhulu izolo, uale kahle impela futhi uzibeke esithombeni sokuthola indawo kwi-Test. Namhlanje sishaye kahle, sathatha isinqumo sokuthi sizame futhi sinike wonke umuntu ithuba lokushaya. u-Hashim uthathe umhlalaphansi ngesikhathi ethola u-78 ukunika abanye ithuba lokushaya. Ekugcineni kuphoxile ukuthi abashaya ezansi abalisebenzisanga kahle ithuba. Ukukhishwa ntambama bekungekuhle kodwa akupheli umhlaba. Sidlulela e-Galle, sibenesonto elihle lamalungiselelo.”
u-Gibson ugculisekile ngenketho kulaba abaphosayo anabo, futhi uzwa ukuthi i-pace ne-spin kuzodlala indima kule-series. Uyavuma ukuthi ukudlala ama-spinners amabili kungenzeka, kodwa uzokwazi ukwenza isinqumo emuva kokubheka isimo e-Galle International Stadium.
“Sikwenzile okufanele njengoba sikhethe leliqembu,” esho. “Sinabadlali abane abaphosa ngokushesha kanye nama-spinners amathathu, kuzomele sifike e-Galle futhi sibheke lapho ezobe kudlalelwa khona ukuthi kuzobe kunjani. Siyathemba ukuthi lokho esizokukhetha kuzoba namandla, okuzosinqobela i-Test.”
“Sizozama futhi sikhethe ophosayo olungele isimo esizohlangana naso,” esho echaza. “Uma isimo sizokhetha i-spin, sizozama futhi sithole esinye i-spinner esizodlala. Uma kubukeka sengathi kuzoba i-pitch enhle futhi sizwa ukuthi enye i-pace izokwenza umehluko kuma-Sri Lankans, sizokucabanga nalokho. Okwamanje akukho esikukhethayo, ukubuka lapho okuzodlalelwa khona kuzosiza ekuthatheni isinqumo.”
u-Markram ujabulela inselelo yakwi-sub-continent u-Steyn ubuya kuma-Proteas; kufakwe ama-spinners amathathu kwi-tour yase-Sri Lanka u-Markram ujatshuliswa unyaka wokuqala enkundleni yezwe u-Rabada ubheka unyaka ohambe kahle u-AB de Villiers uthatha umhlalaphansi emuva komsebenzi weminyaka engu-14 kuma-Proteas i-CSA ne-CA bamemezela imidlalo yama-Proteas ngebhola elimhlophe behambele e-Australia i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel